ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့သင်သည်ခရစ် | Apg29
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူတို့ပြောင်းလဲခြင်းစစ်မှန်လျှင်ထွက်ရှာတွေ့မှဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအပါအဝင်ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏နေအိမ်သို့၏အခြေခံအဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြလို့ပြောတဲ့အခါ။ ဤတွင်ကျွန်မ 12 ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုစာရင်းပြုစု။
ကျွန်မ 35 နှစ်အဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏င့်ခြင်းနှင့်မေးခွန်းများကိုအများစုမဖြေနိုင်။ အဓိကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ငါဖြေဆိုနိုငျပါသညျ!
ဤနေရာတွင် unedan 12 မေးခွန်းများကိုမှယူထားပါသည် မိနစ် သူတို့အမှန်တကယ်ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ * လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Service ကိုပြောင်းလဲတောင်းရာ၏။ (* ကျွန်မဆောင်းပါးထဲမှာနောက်ထပ်ဆင်းရှင်းပြသောစကားလုံး "ပြောင်းလဲ" မကြိုက်ဘူး။ )
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမဿဲ 10:34 ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဘာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြနိုင်ပါသလား?
ပရိုတက်စနှင့် Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
သငျသညျ sacraments နိုင်သလား?
အီစတာတနင်္ဂနွေမှ Maundy ကြာသပတေးနေ့ကနေဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ပြပါ။
Pentecostal နှင့်ဆွီဒင်ဘုရားကျောင်း, အခြားသောအသင်းတော်များမှတစ်မစ်ရှင်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကဘာလဲခွဲခြား?
အဆိုပါကိစ္စများ၏အရင်းအမြစ်, ငါ "တွေ့ပြီ ယခုတွင်ငါသည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးလား " သင်ကိုလည်းစမ်းသပ်ယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိ။ ဒါကြောင့်ငါကအကြောင်းစိတ်မပူပါဘူး, ကျွန်မ 35 နှစ်အဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါစမ်းသပ်မခံမရပ်နိုင်။
အဘယ်အရာကို, သင်ခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်မရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်သင်သည်သူတို့၏ဘဝများ၏သခင်အဖြစ်ယေရှုရရှိထားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျမယျဆိုရငျသမ်မာကမျြးလည်းပြောပါတယ်အဖြစ်, ထို့နောက်သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးမဟုတျပါ, ဒါမှမဟုတ်ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောသို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်သငျသညျကိုသိကျွမ်းရာတွေအများကြီးရှိသည်ကြောင့်, သင်မူကားသခင်အဖြစ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါလျှင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤအခြေအနေမျိုးတွင်တဦးတည်း "ပြောင်းလဲ" နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းကြသူယုတ်လူများ၏ပြော၏။ ငါစကားလုံးငါကအထင်မြင်မှားစေသောထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။
ထိုသို့သောခရစ်ယာန်ဘာသာအဖြစ်, မည်သည့်ဘာသာကိုမှပြောင်းတွေအကြောင်းသည်မဟုတ်, သငျသညျသခငျဘုရားအဖြစ်သညျယရှေုခရစျ၏အသကျရှငျပုဂ်ဂိုလျတစျဦးရရှိထားလျှင်အကြောင်းပါ!
အဘယ်သူမျှမကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - သင်လက်ခံရရှိကြောင်းတိုက်ရိုက်လူတစ်ဦးရှိပါသည်။ ဘာသာတရားကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဖူးဘူး, ဒါပေမယ့်သညျယရှေုခရစျ၏လူတစ်ဦးရွေးခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်စနစ်တကျသိမ်းဆည်း!
ငါထင် Micael Grenholm အင်တာနက်ပေါ်တွင်စမ်းသပ်ထုတ်ဝြေခင်း၏ကနဦးတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အရှင်မေးသော်မေးခွန်းများကိုဘယ်လိုထုတ်ဖေါ်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအလွန်ကောင်းစွာကမေးမွနျးခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းတစ်ဦးတည်းသာမေးခှနျးကိုဖွင့်သည့်အခါမေးလျှင်စိတ်ပျက်ဖွယ်မေးခွန်းများကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့သူ့ကိုအားဖြင့်ပြုထင်:
Vecka 21, torsdag 23 maj 2019 kl. 04:56